20W 546 Leds/M 24V 10mm White COB LED Strip Light Manufacturers and Suppliers - Light On
Home > Products > LED Strip Light > White COB Strip LED > 20W 546 Leds/M 24V 10mm White COB LED Strip Light
အကောင်းဆုံး LED သည် Veg နှင့် Flower အတွက်အလင်းကြီးထွားစေသည်
600 Watt LED ဒေါင်လိုက်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အလင်းကြီးထွား
၁။ ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက် 20W 546 leds / m 24V 10mm အဖြူရောင် COB LED strip light
The 20W 546 leds/m 24V 10mm white COB LED strip light is dot-free flexible white LED strips, the light of which is emitted through arc fluorescent colloid covered on the chip surface and high reflection refraction ink coated on the substrate surface achieve intensive continuous luminous effect. It can be easily installed with the 3M adhesive tape on the back and suitable for hotels, shopping malls, home furnishing, cabinets, exhibition racks, etc., More information can be found below.
၂။ 20W 546 leds / m 24V 10mm အဖြူရောင် COB LED မီးချောင်းအလင်း၏ 2. Product Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
Product name: 20W 546 LED / မီတာ 24V 10mm အဖြူရောင် COB LED မီးချောင်းအလင်းရောင် အိုင်ပီအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - IP20, IP65, IP67
မော်ဒယ်နံပါတ်။: LION-NWD24DC20-D9-546 Operating Temp.: -25 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ~ + 45 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
FPC အကျယ်: 10mm Storage Temp.: -25°C~ +70°C
Light source: COB LED Standard Length:5meters
COB အရေအတွက်: 546 pcs/m ခုတ်နိုင်သောအရှည် 40mm
LED color: White Certification: အီး, RoHS, FCC က
Color Temp.: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K Warranty: ၃ နှစ်
CRI: â 90, 90 တစ်သက်တာ: 50000 hrs
SDCM ≤5 ထုပ်ပိုးနည်းလမ်း:5မီတာ / reel / အိတ်
Beam angle: 180 ° Packing info.: reels / box 50
Luminous Flux: 2000lm/m သေတ္တာအရွယ်အစား: 500 * 356 * 206mm
Working voltage: 24V G.W per box: ၈ ကီလိုဂရမ် (IP20)
Power: 20W/m လျှောက်လွှာ ထောင့်အလှဆင်ခြင်း၊ ပုံထွန်းခြင်း၊ KTV၊ ဈေးဝယ်စင်တာ၊
၃။ ကုန်ပစ္စည်း၏အသွင်အပြင်၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် 20W 546 leds / m 24V 10mm အဖြူရောင် COB LED strip strip ကိုအသုံးပြုခြင်း
20W 546 leds / m 24V 10mm အဖြူရောင် COB LED strip light သည် DC24V power အားဖြင့်အသုံးပြုထားပြီး၎င်းတွင်အောက်ပါလက္ခဏာများပါဝင်သည်။
· Doltless lighting performance
· RF ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိ, တုန်ခါမှုခံနိုင်ရည်ရှိသည်
· Maintenance free, with 3M tape for easy installation
·နာရီပေါင်း ၅၀၀၀၀ ခန့်သက်တမ်းရှိသည်။
၄။ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အချင်း 20W 546 Leds / m 24V 10mm အဖြူရောင် COB LED Strip Light
ကျွန်ုပ်တို့၏ LED မီးအလင်း၏အရည်အသွေးကိုအတောမသတ်အာရုံစိုက်ပါသည်။ ၀ င်လာသောကုန်ကြမ်းများအားလုံးကိုထုတ်လုပ်မှုမပြုမီ ၁၀၀% စစ်ဆေးရမည်။ ပထမနမူနာကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုမီနှင့်အိုမင်းခြင်းစမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီစစ်ဆေးရမည်။ ၁၀၀% စစ်ဆေးမှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 20W 546 Leds / m 24V 10mm အဖြူရောင် COB LED Strip light သည်အနည်းဆုံး ၄ နာရီအိုမင်းခြင်းစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ သုညချွတ်ယွင်းမှုကိုသေချာစေရန်အထုပ်နှင့်တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ ၁၀၀% နောက်ဆုံးစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
(၁) သင်၏စုံစမ်းမေးမြန်းမှုအားအားလပ်ရက်များ၌ပင် ၂ နာရီအတွင်းပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါလိမ့်မည်။
(၃) ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM နှင့် ODM အမှာစာများကိုလက်ခံပြီးထောက်ခံသည်
(၅) NDA ကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးသင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကာကွယ်နိုင်သည်။
20W 546 LED / m 24V 10mm အဖြူရောင် COB LED Strip Light ၏အာမခံကာလသည် ၃ နှစ်ဖြစ်သည်။ အာမခံကာလအတွင်းချွတ်ယွင်းသောနမူနာအမှာစာ (၂ ပီစီအောက်) မွာကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား ASAP အစားထိုးခြင်းနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ချွတ်ယွင်းမှုများအတွက်သင့်အားထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်သည်၊ အစားထိုးထုတ်ကုန်များကိုသင်နောက်တစ်သုတ်တွင်သဘောတူထားသည့်အတိုင်းပို့မည်။
20W 546 Leds / m 24V 10mm အဖြူရောင် COB LED Strip Light ကိုဖြန့်ဝေခြင်း၊ သဘောင်္တင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
Our 20W 546 leds/m 24V 10mm white COB LED strip light is well packaged with heavy duty materials so that it will not be worn or broken during transportation. For small or sample orders, we suggest Express Service by UPS, FedEx or DHL; For bulky orders, sea freight is more preferred.
၆။ 20W 546 Leds / m 24V 10mm အဖြူရောင် COB LED Strip Light ၏ FAQ
ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ရုံတွင် LED Lighting ကိုအထူးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေး၊
ကျွန်ုပ်တို့တွင်တင်းကျပ်သော QC လုပ်ငန်းစဉ်ရှိပြီးမီးအားလုံးမပြီးမီနာရီ ၁၀၀% ၂၄-၄၈ နာရီစစ်ဆေးပါမည်။
ထုတ်လုပ်မှုအတွက်သိုက်အဖြစ် ၃၀%၊ ကျန်ငွေကိုမပေးပို့မီပေးချေလိမ့်မည်။
T / T, PayPal နှင့် Western Union တို့ကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ အမှာစာအရေအတွက်ပေါ် မူတည်၍ ငွေ၊ L / C, D / P သို့မဟုတ်အခြားငွေပေးချေမှုပုံစံများကိုလက်ခံသည်။
hot Tags:: 20W 546 Leds/M 24V 10mm White COB LED Strip Light, Manufacturers, Suppliers, Wholesale, Buy, Factory, Customized, Made in China, Free Sample, Price List, Advanced, Fashion, Quality
10W 210 Leds/M 24V 8mm White COB LED Strip Light
10W 378 Leds / M 24V 8mm အဖြူရောင် COB LED Strip Light
6W 384 Leds / M 24V 5mm အဖြူရောင် COB LED Strip Light
10W 512 Leds / M 24V 8mm အဖြူရောင် COB LED Strip Light
8W 528 Leds / M 24V 5mm အဖြူရောင် COB LED Strip Light